အတုထောက်လှမ်းရေး: ဒါဝင်သည့် algorithms တှငျအဘယျပုန်းအောင်းခဲ့သည်ဆိုပါက? - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » စာပေ • သိပ္ပံ • ကုမ္ပဏီ • TECH & Telecom "Artificial Intelligence: ဒါဝင်သည့် algorithms အတွက်ပုန်းအောင်းခဲ့သည်ဆိုပါကဘာလဲ?
အတုထောက်လှမ်းရေး: ဒါဝင်သည့် algorithms တှငျအဘယျပုန်းအောင်းခဲ့သည်ဆိုပါက?
Eliséoမင်းသမီး Emma Kamgang9မတ်လ 2019
လူသားတို့၏တခြားအသိဉာဏ်နှင့်အတူအသက်ရှင်ဖို့ပြင်ဆင်ထားပါသလား? အဘယျကွောငျ့အကြှနျုပျတို့ AI အအများကိန်းစကားပြောသင့်သလဲ တိရိစ္ဆာန်, လူ့ခြင်းနှင့်အတုဉာဏ်အကြား, Pascal Picq ကျွန်တော်တို့ကိုသူ၏နောက်ဆုံးစာအုပ်ထဲတွင်တစ်ဦးဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သင်တန်းပေးသည်။ ဒါဝင်သည့် algorithms အတွက်အလတ်စားအဘယ်ကြောင့်ကောလိပ်က de ပြင်သစ်မှာ Paleoanthropologist နှင့်ပါမောက္ခ, သူကရှင်းပြသည်။
တစ်ဦး univesitaire ကျောင်းဝင်းကျူးကျော်ခြင်းနှင့်နည်းလမ်းကိုသူတို့ရဲ့ပစ်မှတ်မှာရိုက်ကူးကြောင်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရမောင်းသူမဲ့လေယာဉ်များ။ သောကကုလသမဂ္ဂမှမကြာမီမရှိတော့သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်လိမ့်မည်တစ်ဦးကမြင်ကွင်း။ ကုလသမဂ္ဂအဆိုအရ 2030 မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းအတွက်အမျိုးမျိုးသောလူအမျိုးမျိုးစက်ရုပ်လူသတ်သမားတပ်ဆင်ထားပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းသည်ထိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသေစေလောက်လက်နက်တွေများအတွက်မူဘောင်များအတွက်တောင်းဆိုထားသည်။ ပြင်သစ်ထုတ်လုပ်သူ Thales တစ်ကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်များတစ်ဦးစုစုပေါင်းပိတ်ပင်မှုဟုပြောသည်။ အဆိုပါကျင့်ဝတ်ရှေ့တန်းအပေါ်အစီရင်ခံစာ။
artificial ထောက်လှမ်းရေးစာအုပ်ဆိုင်များတွင်ရောင်းချပါတယ်။ , decipher ဝေဖန်သို့မဟုတ်ဂုဏ်ကျေးဇူးကိုမှစာအုပ်အများအပြား။ ဝီလျံ Grallet ထွက်သည်သူ၏စာဖတ်ကတ်များကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းပြ။
ထိုအ Test24 ၌, "ဒစ်ဂျစ်တယ် detox" Vogue ၌တည်ရှိ၏။ ကနေဒါ Umay အနားယူ - ဘာဝနာနှင့်အပူကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးမကျြစိကိုအပန်းဖြေဖို့ကူညီရန် - ထို Seraphin မှပြင်သစ်နှင့်ပင်ပန်းစမတ်ဖုန်းများအတွက်၎င်းတို့၏အမှုများကိုပြုလုပ် disconnect ရန်သင့်အားကူညီပေးသည်။
SOURCE မှ: fr24
Nifa - အရာအားလုံး Give (သူ့ offcial)